Nezvedu - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Basa redu: Enderera kugadzira yakanyanya kukosha yevatengi uye nekupa vashandi chikuva kuti vaone kuzvikoshesa
Chiono chedu: Akazvipira kuve anonyanya kuve nyanzvi uye anokwikwidza anoshanda machira anotengesa nekusimudzira kusimudzira uye kugwinya kweiyo indasitiri
Maitiro edu: Tarisa, Kugadziridza, Kushanda nesimba, Kubatana, Win-kuhwina
Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2004. Zviri nyanzvi nokutengesa micheka dzakarukwa. Fuzhou Huasheng yakazvipira kupa mhando yepamusoro ye warp yakarukwa uye yakatenderera yakarukwa machira anoshanda kune vese vashandisi.
Mushure memakore anopfuura gumi nematanhatu ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, Fuzhou Huasheng akavaka kwenguva yakareba uye yakagadzikana mushandira pamwe pamwe nevatengi vanokosha kubva kuNorth America, South America, Europe, uye Southeast Asia etc. machira akarukwa uye micheka yakatenderera yakarukwa.
Fuzhou Huasheng ari nyanzvi R & D, kugadzirwa uye Marketing pamusoro pajira riya micheka, micheka tricot, jira micheka, interlock micheka, jacquard micheka, mélange micheka uye dzichipfekeka micheka. Isu tinoshandisa yakakwira mashandiro ekuruka zvinhu uye kuti zvishandurwe kuita machira akagadzirira neanoshanda magumo uye tobva taendesa kune edu akakosha vatengi kubva kumativi ese epasi.
Parizvino, isu tine maseti anopfuura makumi matanhatu emachina ekuruka uye isu tine vangangoita zana nemakumi mashanu emabasa. Nezvitarisiko zvitsva zvemusika zveramangwana rakagadzikana, isu takagadzirisa nzira dzedu dzekugadzira nekupa cheni. Isu tinozvipira isu kuti tipe kukosha uye mhinduro kune vatengi vedu.
Machira edu anoshandiswa zvakanyanya muminda yakawanda senge mitambo yemitambo, yunifomu yekupfeka, yoga mbatya, zvekupfeka, zvipfeko zvemafashoni, kupfeka kupfeka, zvipfeko zvemukati, swimwear, zvipfeko zvepedyo, uye nguo dzemukati nezvimwe.
Fuzhou Huasheng inoomerera kune bhizinesi pfungwa yeHupenyu hupenyu hwedu uye Mutengi ndiye wekutanga.
Noushamwari shamwari dzinodiwa dzinobva kumativi ese epasi kushanyira kambani yedu uye kutaurirana bhizinesi